Al-shabaab oo weeraray Masjid iyo Dugsi Qur’aan | Somali National Television - sntv.so
Home ARGAGIXISADA Al-shabaab oo weeraray Masjid iyo Dugsi Qur’aan
Al-shabaab oo weeraray Masjid iyo Dugsi Qur’aan
Al-shabaab sida caadada u aheyd waxa ay degmada Howl-wadaag ka geysteen weerar ay u adeegsadeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey, waxa uu weerarka geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Kooxdani dhiigga Muslimka u Oommani waxa ay beegsadeen goob Alle lagu xuso.
Masjid ALLE lagu caabbudo ayeey weerareen, waxaa soo gaaray burbur dadkii ku cibaadeysanayey dhiiggooda ayaa ku qubtay halkaan, sidoo kale waxa ay beegsadeen Dugsi Qur’aan kariimka lagu baro Carruur yar-yar, si ay goobaha cibaabada ugu qubaan dhiigga Muslimiinta, carruurtaas waxaa gaaray khasaare kala duwan.
Argagixisada Al-shabaab durbaba waxa ay ku faaneen weerarkaas lagu xasuuqay biri-mageydada aan waxba galabsan, burburinta Masjidka iyo Malmacadda Qur’aanka lagu baranayey.
Waa nasiib darro kale, yaabse maleh oo hab dhaqanka kooxda Al-shabaab iyo kuwa la fikirka ah ayaa ah gaaleysiinta iyo daadinta dhiigga dadka Muslimiinta ah.
Macne kama lahan dhankooda Meesha aad ku sugan tahay macne kama lahan dhinacooda in aad Muslim tahay, macno weyn kama lahan dhankooda in aad Masjid ku jirto oo aad ALLE u Sujuudsan tahay in aad dowlad u shaqeyso ama in aad qof rayid ah tahay.
Ma jiraan goob iyo dad ay xurmeeyaan Al-shabaab waxa ay u taagan yihiin ciddii aan aheyn in ay tahay qof aan Muslim aheyb.
Waxa ay Magaca Diinta Islaamka ugu gefayaan Islaamka oo dhan.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia oo ku kulmay Beijing
Next articleMadaxda dalka oo ka qeyb galay aaska Maamadii dhashay guddoomiyaha Baarlamaanka